ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: August 2009
လိမ်တယ်ညာတယ်လူညာကြီးရယ်... Indian man married 14 women in two years
တယ်...ထိုအမှုကြောင်.အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ.လူလတ်တန်းစားအမျိူးသမီးများရဲ.အဆင့် အတန်းမြင့် တဲ.လင်
Tushar Waghmare လို့ အမည်ရှိတဲ့ အဆိုပါအင်ဂျင်နီယာနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ တဲ့ အမျိူးသမီးအများစုဟာ
ပညာတတ်မိန်းမများဖြစ်ကြပေမယ့် သူတို့ ဟာ အဆိုပါအမျိူးသားဟာအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်
တယ်ဆိုတာနဲ့ သူ့ ရဲ့ ဘ၀နောက်ကြောင်းကိုဆက်လက်စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းမရှိတော့ ပါဘူးတဲ့ ....
ဆွေစဉ်မျိူးဆက်အရမျိူးရိုးအလုပ်အကိုင်အဆင့် အတန်းကိုအလွန်ပဲအလေးထားတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ဓလေ့ 
အရအိမ်ထောင်ပြုလက်ထပ်ခြင်းဟာအလွန်ပဲအရေးကြီးတဲ.ကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်လို့ လက်ထပ်မဲ့ သတို့ သား
နဲ့ သူတို့ သမီးဟာချစ်သူတွေမဖြစ်တတ်ကြပဲအများအားဖြင်.အဆင့် တူချင်းဂုဏ်ရည်တူခြင်းစီစဉ်
အသက် ၄၀ အရွယ်ရှိ အင်ဒီးယားအဲယားလိုင်းကအင်ဂျင်နီယာ Waghmare ဟာသူလက်ထပ်ပေါင်း
သင်းခဲ့ တဲ့ အမျိူးသမီးတွေကိုအိန္ဒိလူမျိူးအိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်ရေးအင်တာနက်စာမျက်နှာမှာတွေ့ ရှိ
ခဲ့ တာလို.ဆိုပါတယ်...အဲဒီဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှာသူဟာသူ့ ကိုယ်သူအိမ်ထောင်ဖက်နှင့် ကွာရှင်းထားသူ၊ဇတ်
မြင်.ဗြဟ္မနအမျိူးသမီးပညာတတ်များနဲ.ဖူးစာဆုံလိုသူပါလို့ ဖေါ်ပြထားခဲ့ ပါတယ်တဲ့ ....
သူရဲ့ ပုံပြင်ကိုယုံမှတ်လို.ပုံအပ်ပြီးသူနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ တဲ့ အမျိူးသမီးသုံးဦးဟာသူတို့ ကိုယ်တိုင်အင်ဂျင်နီ
ယာ၊ဗိသုကာပညာရှင်တွေဖြစ်နေကြတာပါပဲ....သူမတို့ အားလုံးရဲ.မိဘတွေဟာ Waghmare နဲ့ တွေ့ 
ဆုံခဲ့ ကြပြီးသူတိုဟာသူ့ ရဲ့ လစာ တစ်လ ရူပီး ၇၀၀၀၀ ( ဒေါ်လာ ၁၄၃၀ ) ဆိုတာလည်း သိရောတစ်
သူဟာထိုအမျိူးသမီးတွေကိုလစာငွေထောက်ပံ့ ခဲ့ တာမို.သုံးလေးရက်လောက်သူတို့ နဲ.ပေါင်းသင်းနေ
နဲ့ သူထွက်ခွာသွားတဲ့ အခါတိုင်းထိုအမျိူးသမီးတွေဟာဘာမှထွေထွေထူးထူးမေးမြန်းမနေတော.ပါ
နောက်ဆုံးသူဟာလက်ထပ်ပေါင်းသင်းခဲ့ တဲ့ အမျိူးသမိး ၁၄ ယောက်စလုံးကိုလစာငွေနဲ့ မထောက်ပံ့ နိုင်
တော့ လို.မိန်းမတွေကသူ့ ကိုပြန်ပြီးငွေပြန်ပို့ ပေးခဲ့ ရလို့ အခုလိုအဖြစ်မှန်ပေါ်ပေါက်ပြီးတရားစွဲဆိုခံခဲ.ရ
”သူ့ ရဲ.ယောက်ခမလောင်းတွေ၊ဇနီးလောင်းတွေအကုန်လုံးဘယ်သူမှသူ့ ရဲ.ဘ၀နောက်ကြောင်းတွေကို
စုံစမ်းမေးမြန်းဖို့ သတိတောင်မရ၊မတွေးခဲ့ မိကြပါဘူး...ဘာဖြစ်လို့ လည်းဆိုတော့ သူဟာလစာဝင်ငွေ
အင်မတန်ကောင်းတဲ့ အင်ဂျင်နီယာလည်းဆိုလိုက်ရော၊အားလုံးဟာအထင်ကြီးလွန်သွားခဲ့ ကြလို.ပါပဲ ”
ရဲတပ်ဖွဲ့ ပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်မှ၊ဆရာဝန်မှ၊အင်ဂျင်နီယာမှ၊စစ်ဗိုလ်မှ၊သင်္ဘောသားမှ စတဲ့.....
ငွေဂုဏ်၊ကြေးဂုဏ်၊အဆင့် အတန်းမက်မောလွန်းတဲ့ အမျိူးသမီးများသတိထားသင့် တာပါပဲ...
An Indian engineer has been charged with bigamy after wooing 14 women and marrying them in the space of just two andahalf years. The case has revealed the desperation of middle class Indian women in their quest forahigh-status husband.
Marriage is the most important assertion of status in India's rigidly hierarchical society, and is usually an alliance of compatible families more often thanalove match between bride and groom. Mr Waghmare, 40, an Air India engineer from Mumbai, found the women on Indian matrimonial websites, where he described himself asadivorcee looking forahigh-caste Brahmin career woman.
ီDetectives said he was eventually caught when his salary would not stretch to each of his 14 wives and they had to support him instead. "None of the women or their parents ever thought of doingabackground check on him as they would be impressed with his job profile," saidapoliceman.
Posted by Unknown | at 4:19 AM |2comments
Labels: News : Daily Telegraph
သူတို.ဆီကမိုးခေါ်ပရိတ်ရွတ်ပွဲ... Mantra for rain ....
Mantra for rain ....
ကြာအောင် Sakara Mattham မိုးနတ်မင်း အားအထူးတိုင်တည်ဆုတောင်းဂါထာများရွတ်ဖတ်ပွား
မွန်ဘိုင်းမြို.အနေဖြင်.မိုးခေါင်ရေရှားမှုကြောင်.လောလောဆယ်တွင် ၁၅ ရာခိုင်နှုံးရေဖြတ်တောက်
ခြင်းခံနေရပြီးယခုလအတွင်းမိုးမရွာပါက ၃၀ ရာခိုင်နှုံးအထိရေဖြတ်တောက်ခြင်းခံရမည်ဟုသိရပါသည်...
ကျွန်တော်တို.ဆီမှာတော့ ငါးရံ့ မင်းပရိတ် ဆိုလား...မိုးခေါ်ပရိတ်တစ်မျိူးတော့ ရှိတယ်ထင်ပါတယ်....
Hindu holy men chant mantras and pray in the Varuna ritual to appease
the rain God at the Sakara Mattham in Mumbai yesterday. Ten priests stood
neck deep in water for over four hours to perform special prayers for the
arrival of rains. India's financial and entertainment capital is currently facing
the 15 percent cut in water supply and will have to brace fora30 percent
water cut from October 1 if there are no rains in this month .
Posted by Unknown | at 4:17 AM |0comments
Labels: odd news :7days
တရုတ်နိုင်ငံကကောင်လေးတစ်ယောက်မိန်းမချော ချောပုံကတော.အံ့ သြလွန်းလို့ လက်မှိုင်ချ
An ordinary Chinese guy, right? Nothing special.
If you are sure, then click to see more.
ကဲ ....အောက်ကပုံကိုကြည်.လိုက်တော့ .....
Posted by Unknown | at 10:58 AM |4comments
ဆိုက်ဘေးရီးယားကယေရှုခရစ်တစ်ဖန်ပြန်လည်ဝင်စားသူ.... Jesus of Siberia
သစ်သားပလ္လင်ပေါ်က ....ယေရှုသခင် ....
Russian ex-traffic cop Sergei Torop sits on his wooden throne duringameeting with his followers in the remote village of Petropavlovka
သူ၏မုတ်ဆိတ်ကျင်စွယ်နှင့် ပျော့ ပြောင်းနူးညံ့ သောဆံပင်များကယေရှုသခင်၏ယခင်ပုံသဏ္ဍာန်
သူ၏လေလွင့် တိုင်းမြောနေသောဝတ်ရုံနှင့် လူသားများအားအနစ်နာခံကယ်တင်ခွင့် လွှတ်တတ်
သောအပြုံးတို့ ကသူ့ ရုပ်ရည်ကိုတစ်ကယ့် သူတော်စင်တစ်ပါးအသွင်ထင်ဟပ်နေပေသည်...
သို့ သော်...သူ့ ကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြသည့်ရုရှားနိင်၏ဝေးလံခေါင်သီသောဆိုက်ဘေးရီးယား
နယ်အစွန်အဖျားမှဒေသခံပြည်သူများကတော့ ယခင်ယာဉ်ထိန်းရဲဝန်ထမ်းဟောင်း Sergei Torop
ယခုအခါမှာတော.အသက် ၄၈ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Sergei Torop ဟာရုရှားနိုင်ငံမြို့ တော်မော်စကိုနှင့် 
မိုင်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ကွာဝေးတဲ့Petropavlovka ဆိုတဲ့ ရွာငယ်လေးမှာနေထိုင်လျက်ရှိပြီးလူ
ပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်ရဲ့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ...
သူ.ကိုကြည်ညိုကိုးကွယ်သူတွေထဲမှာအဆင့် မြင့် ခေတ်ပညာတတ်များ၊အနုပညာရှင်များနဲ့ မိမိတို့ 
For thousands of followers, Vissarion is no less than the second coming of Jesus of Nazareth, reincarnated 2,000 years after his crucifixion, deep in the Siberian wilderness
Torop ကိုသံမဏိကန့် လန့် ကာလို့ တင်စားခေါ်တွင်ခဲ့ တဲ့ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကြီးပြိုကွဲပြီးစလူ
အများစိတ်ဓါတ်ကျဆင်းပြီးယုံကြည်မှုအကျပ်အတည်းဆိုက်နေချိန် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် Vassarion
နိုင်ငံရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာလူစွမ်းကောင်းကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုအစွဲအလမ်းပြယုဂ်ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်စံန
ရုရှားကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ခဲ့ ကြတဲ့ လီနင်ရောစတာလင်ပါအဲဒီရုရှားလူထုရဲ.ကိုးကွယ်ယုံကြည်
မှုဆိုင်ရာဘာသာရေးအယူသီးမှုရဲ့ တန်ခိုးရှင်တွေကိုစွဲလမ်းကြည်ညိုမှုကိုစိမ့် ဝင်ကြိုးပမ်းအသုံးချနိုင်ခဲ.ကြ
Russian ex-traffic policeman Sergei Torop, now known as Viassarion, meets with his followers in the remote village of Petropavlovka
စစ်တပ်ထဲကထွက်ပြီးနောက် Torop ဟာဆိုက်ဘေးရီးယားကမြို.ငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့Minusinsk
မြို့ မှာယာဉ်ထိန်းရဲအဖြစ်ညပိုင်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ တာအဲဒီရာထူးကနေရပ်စဲခံခဲ့ ရသည်အထိ
အဲဒီနောက်တစ်နေ့ တော့ ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲ သူ့ ရဲ့ မသိစိတ်အတွင်းအာရုံတွေနိုးကြွလာပြီးသူဟာ
သူ့ ကိုယ်သူလွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ လောက်ကကားစင်တင်ခံခဲ့ ရတဲ့ ယေရှုခရစ်တော်ပြန်ဝင်စား
သူ့ ကိုထာဝရဘုရားသခင်ကယနေ့ လက်ရှိကမ္ဘာကြီးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ နေရတဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရယ်
ဆိုးများနဲ့ ဆိုးရွားလှတဲ့ စစ်ပွဲတွေရဲ့ အနိဌာ၇ုံဆိုးကျိူးတွေအကြောင်းကိုလူသားတွေကိုဟောပြောပြသဆို
ဆုံးမဖို့ ဒီကမ္ဘာမြေကိုစေလွှတ်ခဲ့ တာလို.ဆိုပါတယ်....
သူပထမဦးဆုံးတရားစပြီးဟောပြောခဲ့ တဲ့ သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်နေ့ ကိုသူတို့ ရဲ့ အထူးပွဲတော်နေ့ အဖြစ်
သတ်မှတ်ခဲ့ တာမို့ သူ့ ကိုယုံကြည်သူတွေအတွက်တော့ ခရစ်စမတ်ပွဲတော်နေ့ ဆိုတာမရှိတော့ ပါဘူး....
သူဟာအခုဆိုအသက် ၄၈ နှစ်အရွယ်ရှိပြီမို့ သူ့ သာသနာရဲ့ သက်တမ်းကိုလည်းသူ့ အသက်အတိုင်းယူ
ပြီးရေတွက်တာမို့ သူ့ ကိုယုံကြည်သူအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာတော့ သူတို့ ဝတ်ပြုဆုတောင်းတဲ့ ဘုရားကျောင်း
ရဲ့ သက်တမ်းဟာလည်း ၄၈ နှစ်ကျော်လို. ၄၉ နှစ်ထဲမှာပါတဲ့ ....
သူ့ ကိုအသက်အိုးအိမ်၊ရာထူးဂုဏ်သိမ်များစွန့် ပြီးကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတွေဟာတင်းကျပ်တဲ့ ဘာသာရေး
ရွာထဲကသူ့ ရဲ့ ဝတ်ပြုဆုတောင်းရာဘုရားကျောင်းပတ်ပတ်လည်မှာသူ့ ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်သူအ
ယောက် ၃၀၀ လောက်ဟာတဲငယ်လေးတွေထိုးပြီးနေထိုင်ကြပါတယ်...( သက်ဆိုင်ရာဘာသာနေရး
ဌာနတွေကအသိအမှတ်မပြုလို. ) အဲဒီဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုတော့ မည်သည့် မြေပုံမှာမှရှာတွေ့ နိုင်
တစ်ခြားထောင်နဲ့ ချီတဲ့ သူ့ ကိုယုံကြည်သူနောက်လိုက်များကတော့Petropavlovka ရွာကလေးမှာ
ပဲသူတို့ အိမ်ကလေးတွေတည်ဆောက်ပြီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ ဆိုက်ဘေးရီးယားရဲ့ နာမည်ကျော်ဆောင်း
ဒဏ်ကိုကြံ့ ကြံ့ ခံနိုင်ကြပါတယ်...ဒါမှလည်းသူတို့ ရဲ.ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ သားတော်နဲ့ နီးနီးနေနိုင်
နဲ့ သူ့ နောက်လိုက်တွေဟာခါးကျိူးမတတ်ခက်ခဲပင်ပန်းလှတဲ.ရိုးရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်တွေ
ဘုရားသားတော်အဖြစ်တစ်ဖန်ပေါ်လာတဲ. ယေရှုသခင်တစ်ဖြစ်လဲ Vissarion ဆရာကတော့ သူ့ ဇနီး
နဲ့ သားသမီးခြောက်ယောက်တို့ အတူတစ်ကွနေထိုင်ကြတဲ့ သူ့ ကိုယ်ပိုင်တဲအတွင်းမှာပန်းချီဆွဲယင်းအချိန်
ကလေးတွေထဲကတစ်ယောက်သောကလေးကတော့ သူတို့ အဖွဲ့ ထဲကလင်ယောကျာင်္းမရှိတော့ တဲ့ အမျိူး
သူ့ ကိုမယုံကြည်၊ဝေဖန်သူတွေကတော့ သူဟာသူ့ ကိုယ်ကျိူးအတွက်ယုံကြည်သူနောက်လိုက်တွေထံက
အမွှေးနံ့ သာဆီမီးများနှင့် ....ကိုယ်တော်ကို....ထွန်းညှိပူဇော်...
An elderly woman placesacandle underapicture of 'Vissarion the Teacher', in the village's church
မကြာသေးခင်နှစ်များအတွင်းကတော့ သူဟာ ပြင်သစ်၊အီတလီနဲ့ ဟော်လန် နိုင်ငံတို့ ကိုနောက်ထပ်သူ့ 
သူ့ ရဲ့ ဇာတိဘုရားရှိခိုးကျောင်းကငွေကြေးရံပုံငွေမရရှိ၊မကိုင်တွယ်မသုံးစွဲတာမို့ အဲဒီခရီးစဉ်တွေကိုပင့်
ဖိတ်တဲ့ အိမ်ရှင်နိုင်ငံကလူတွေကအကုန်အကျခံစီစဉ်ခဲ့ တာပါလို့ သူကပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်....
သူ့ အရပ်နဲ့ သူ့ ဇတ်ကတော့ ဟုတ်လို့ ပါပဲ ဗျာ....
မူရင်းသတင်းကတော့daily mail သတင်းစာမှာ ဒီလိုဆိုထားလေရဲ့.....
Posted by Unknown | at 1:49 AM | 1 comments
သတိ...မရယ်ရ၊မပြုံးရ.... Militants pull teeth with pincers
Militants pull teeth with pincers
ဆိုမာလီနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှ Al Shabaab အမည်ရှိအစ္စလမ်အစွန်းရောက်စစ်အုပ်စုတစ်စုဟာအစ္စလမ်
လက်နဲ.ပဲဆွဲနှုတ်ပေးနေတာပါ...” လို. Bashir အမည်ရှိငွေသွားအနှုတ်ခံခဲ.ရသူကဆိုပါတယ်...
တော်ဟာမိတ်ဆွေသုံးဦးနဲ.ဆိုင်ကောင်တာမှာရယ်မောပြောဆိုနေတုံးလက်နက်ကိုင် Shabaab သုံးဦး
ရောက်လာပြီးသူတို.နဲ.လိုက်ခဲ.ဖို.ခေါ်သွားတော.တာပါပဲ ...” လို.သူကဆက်ပြောပါတယ်...
ထင်ပါတယ် ” လို.သူကဆိုပါတယ်...
မိတ်ဆွေ ...သင်.မှာရွှေသွားငွေသွားများရှိခဲ.မယ်ဆိုယင်ဖြင်. ...ဆိုမာလီရောက်ခဲ.ယင်မပြုံးနဲ.
မရယ်နဲ.ပေါ. ( ဗုဒ္ဓဟီးလို.တော.မဆိုလေနဲ.ပေါ. ) နော်.....
Somali Islamist group al Shabaab is forcibly removing gold and silver teeth from residents in southern Somalia because it says they contravene strict religious law, locals fromacoastal town said.
“As you smile your silver tooth accuses you. I was atacounter with my friend when three armed al Shabaab ordered me to follow them,” he added.
“I am afraid they want to make money from taking all this precious metal.”
The Islamist group, who refused to comment, said gold and silver teeth are used for fashion and beauty, which is against strict interpretations of Islam.
Posted by Unknown | at 1:25 PM | 1 comments
Labels: news : seven days
ရွှေပြည်ကြီးမှာတော့ သူ့ လိုသွားမလုပ်နဲ့ နော်...
ကိုမောင် (ကိုကျော်သူ ) တို့ အဖွဲ့ အလုပ်ရှုပ်သွားလိမ့် မယ်....
သူကတော.ပြုံးလို့ ပျော်လို့ ပင်...
She lies underamoving train and gets up withasmile on her face afterwards.
I'm sure I would crap my pants.
Posted by Unknown | at 3:02 AM | 1 comments
သူတို.ဆီမှာတော.လူသားအားလုံးအတွက်အခွင့် အရေးအပြည့် အ၀ရှိတာမို့ လူပုလေးတွေလည်း
နှစ်သိမ့် ကြည်နူး...သူတို့ နှစ်ဦး....
ဂိုက်ပေးကြမ်းတဲ့ လူပုလေး...ဘေးလူကတောင်ငေး ....
Posted by Unknown | at 1:16 AM |2comments
သူတို.ဆီကဈေးသည်များ... What are you selling?
အာဖရိက က မိကျောင်းရောင်းသူ....
ဘရာဇီးမှာလဲဖွတ်၊ပုဒတ်ရောင်း တယ် ၀ယ်တယ်...
Leonardo Lima da Silva, 17, offers for sale to passing vehicles an armadillo that he and his brother hunted down to earn some cash, near Maraba in the Brazilian Amazon region, August 18, 2009. In spite of the government prohibition of the sale of wild animals for meat, many people in the region still hunt commercially foraliving.
A man offers rabbits for sale onastreet corner in downtown Santiago de Cuba, Cuba December 9, 2008. [Photo: Claudia Dau]
A man looks at pickled chickens atastall in downtown Shanghai, January 9, 2009. [Photo: Aly Song]
Tropical fish for sale are on display onasidewalk in Gibara, Cuba April 18, 2008. [Photo: Claudia Daut]
A man carries food for sale onastreet in Kano, April 22, 2007. [Photo: Radu Sigheti]
A FLOWmarket employee adjusts cans labelled "holistic thinking" displayed in the shop in Shanghai June 6, 2007. FLOWmarket, which is translated as "Soul Market" in Mandarin, is founded by Danish artist Mads Hagstrom, made its China debut ataShanghai arts festival. The shop sells empty bottles, cartons and cans with labels that preach spiritual concepts and self-love. [Photo: Aly Song]
A boy displays boiled rats for sale on the main highway in Malawi's capital Lilongwe June 20, 2009. [Photo: Thomas Mukoya]
ကံကောင်းတဲ.ခွေးများအတွက်ဂျာမနီကသီးသန်.ပေါင်မုန်.ကိတ်မုန်.အရောင်းဆိုင် ပါတဲ. ...
Labrador Ronja stands next to the display in its owner's dogs-only bakery in the western German city of Wiesbaden January 8, 2007. [Photo: Alex Grimm]
A vendor holdsachick as he waits for customers outsideamarket in Karachi February 1, 2008. [Photo: Athar Hussain]
An Indonesian vendor applies red colouring to chicks before selling them in Jakarta March 26, 2006. [Photo: Beawiharta]
A boy sits onaroad divider waiting to sells Indian national flags atatraffic intersection in Mumbai August 14, 2007. [Photo: Arko Datta]
Posted by Unknown | at 1:56 AM |3comments
Labels: photo news : asia one
လိမ်တယ်ညာတယ်လူညာကြီးရယ်... Indian man married 14...
သူတို.ဆီကမိုးခေါ်ပရိတ်ရွတ်ပွဲ... Mantra for rain ...
သတိ...မရယ်ရ၊မပြုံးရ.... Militants pull teeth with ...
မျက်နှာမများတတ်သူပါ....Egyptian man discovers wife...
Lottery players punt on one-eyed pussy
သူများထက်ထူး...Child Born with Second Penis in the...
Baby’s footprint appears on leg of mother-to-be
Israeli family caught with massive haul of stolen ...
သင်သေဆုံးသွားပြီးသည်.တိုင်...Email loved ones from...
သင်သူ.ကိုတစ်ကယ်ချစ်နေမိပြီလား..... 12 Ways to Know...
N. Korea cracks down on women's pants
ချစ်စရာမြင်းပုကလေး .... Meet Koda the miniature h...
သစ္စာမရှိတဲ.သူကိုဒီလိုလက်စားချေတယ်...Love rat's sti...
Soccer-Russian fans urged to drink whisky to ward ...
Indian man 'sacrifices' five-year-old girl for mal...
ဆော်ဒီကတဏှာရူးမွတ်ဆလင်သူဌေး...Saudi businessman or...
Kids put the heat on police exam cheaters in China
She you later alligator...
တရုတ်ပြီးတော.ရုရှား ..သတိသာထား....Soviet Warship T...
Hungry dog bites the bullet